Qalbi Dhagax iyo Qiraalkii uu bixiyay - BBC News Somali
Qalbi Dhagax iyo Qiraalkii uu bixiyay
9 Luulyo 2018
Image caption Cabdikariim Sheekh Muuse iyo Xildhibaan Maxamed Cumar Carte Qaalib
Waxa uu Qalbi Dhagax ka hadlay xaflad baraalan oo lagu soo dhaweynayay oo lagu qabtay magaalada Nairobi, wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Xaaji Caddoow oo dhagaystay khudbadda Cabdikariim ayaa warbixinta kusoo koobaya nuxurka hadalkiisa maadaamaa ay BBC-da u suurtogali weysay isku day dhawr ah oo aan ku waraysan lahayn.
Soo deynti Qalbidhagax
C/kariim Sheekh Muuse (Qalbidhagax) waxaa dhawaan laga soo daayey xabsi ku yaalla dalka Itoobiya oo uu mudda ku xirnaa.
Qalbidhagax oo marki la soo daayey Addis Ababa shacabka kula hadlay ayaa wuxuu ku nuuxnuuxsaday aadna ugu dheeraaday sida umadda Soomaaliyeed ay uga dhiidhiday dhiibitaankiisa.
Qalbidhagax ayaa intaas ku daray in dadka Soomaaliyeed ay guulaysan doonaan, "waxay ka guulaysan doonaan rag kasta oo cadawgooda iyo xaasidkooda ah, waxay ku guulaysan doonaan Illaahay magaciisa, kartidooda iyo iimaankooda, waxay noqon doonaan umad gaadha aayahooda iyo qiyamka umadooda.
Wuxuu sheegay inuu xoojin doono sidii umadda Soomaaliyeed ''dib loogu mideyn lahaa."
Image caption Qalbi Dhagax markii laga soo siidaayay xabsiga Itoobiya
Soo dhaweynti Qalbi Dhagax ee Nairobi
C/kariim Sheekh Muuse (Qalbidhagax) waxaa si weyn oo aan horay looga soo dhaweyn qof siyaasi ah oo jinsiga Soomaalida leh looga soo dhaweeyey Gigagada diyaaradaha caalamiga ee Jomo Kinyatta halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen boqolaal shacab ah oo Soomaali ka kooban.
Maalintii axadda ee ay taariikhda ku beegnayd 8-da Luuliyo ayaa waxaa xarunta caalamiga ah ee shirarka Nairobi ee KICC loogu qabtay xaflad ay kasoo muuqdeen siyaasiyiin Soomaali ah oo ku jira dowladdaha Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiyaba, halkaas oo uu Cabdikariim ka jeediyay khudbad dheer oo uu kaga hadlay xaaladiisa.
HRW oo ka hadashay arrinta Qalbi Dhagax
Sambaloolshe: Arrinta Qalbi Dhagax waa mid xasaasi ah
Cabdikariim oo hadalkiisa ku bilaabay in uu yahay muwaadhin Soomaaliyeed ayaa sheegay in wixii ku dhacay ay madda Soomaaliyeed u ahayd maslaxo caam ah oo umadda Soomaaliyeed iisu keento.
Halganka Xornima doonka umadda Soomaaliyeed?
Cabdikariim waxa uu yiri "Halgamada xornima doonka umadda Soomaaliyeed ONLF meysan billaabin dagaallada xornima doonka Soomaalidu wuxuu soo billaawday qarnigi 16aad, Axmed Gurey, Seyid Maxammed Cabdille Xasan, halganki SYL, Jeeshkii Nasrullaah, Halgankii 1977 ee Soomaali Galbeed dhammaantood waxaa lagu raadinayey dhul iyo qaddiyadda umadda Soomaaliyeed".
Wuxuu intaasi ku daray "Halganka maanta ay ONLF hoggaamineyso waxuu ka mid yahay oo uu daba socdaa halgamadi umadda Soomaliyeed waxa la doonayaana waa hal dad, waa hal dal, waxaana la xureynayana waa hal umad".
Waxa uu u mahadceliyay baarlamaanka Soomaaliya iyo dadka Soomaalida oo si weyn dareenkooda u muujiyay markii ay soo baxday in dowladda Soomaaliya ay Itoobiya u dhiibtay Cabdikariim Qalbi Dhagax.
Qalbidhagax marka la dhiibayey see loola dhaqmay?
Markii ugu horeysay waxa uu Qalbi Dhagax iftiimiyay sidii loola dhaqmay markii laga qabtay magaalada Gaalkacayo sanadkii hore , wuxuuna yiri "Aniga oo ah C/Kariim Shekh Muuse (Qalbidhagax) waxaan muwaadin Soomaaliyeed oo u soo dagaallamay dalka Soomaliyeed, aniga oo dagaal ku jira yaan ku qaan gaaray, weligeey shaqa guud mooyee shaqa gaar ah maanan qabanin waxaan u soo dagaallamay nafteydii iyo dhiiggeyga oo aan u huray dadka Soomaaliyeed". .
Dunidan aan ku noolahay guri kuma lihi, boos kuma lihi, hanti kuma lihi, oo xoola kuma lihi intaaba intaan ka tagay ayaan danta umadda u baxay.
"Haddaba marki aan arkay sida ay iila dhaqantay dowladda Soomaaliyeed, qaabki ay u shaqeysay marka hore Gaalkacyaa la iga qabtay seddex habeen baa la igu hayey si fool xun oo ihaana ah ayaa la iila dhaqmay. Waa la iga soo qaaday, Muqdisho ayaa la keenay waxaa la iila dhaqmay si fool xun oo ihaana ah. Markii aan arkay inta la igarba duubay aniga oo caga cad, oo qaawan la igu wareejiyey ciidanka Itoobiya waxay ahayd arrin aad iyo aad iiga careysiisay aadna ii xanuujisay, iigana nixisay" ayuu yiri Qalbi Dhagax oo dadkii dhagaysanayay ay ilmo kusoo joogsatay indhahooda.
"Godey markii la i geeyey waxaa isku soo baxay Soomaalidi Godey joogtay inteedi xumeyd, dhaanto ayey igu dul qabsadeen aflagaadda markay ii miiseen seey ii caayanayeen markii la iga qaaday aniga oo ihaaneysan oo katiineydsan oo lugaha ka xiran, oo gacmaha ka xiran oo indhaha ka xiran waxaan aaminay inaanan dal lahayn".
Waxa uu intaas ku daray in uu qalbiga u dagay markii uu arkay in 30 milyan oo Soomaali ah ay dareenkooda muujiyeen, kana xumaadeen in isaga la dhiibay.
Waxa uu sheegay in dadkii sida xun ula dhaqmay ay ahaayeen kuwa yar, isaga oo xusuusiyay in ay u furantahay toowbad keen.
Image caption Siyaasiyiin Kenya , Soomaaliya iyo Itoobiya ka socda ayaa ka qeybgalay
Qalbidhagax yuu u mahadceliyey
-Ra'isul wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed oo go'aansaday isaga oo maxabuus ah oo god salkii ku jira inuu ka soo saaro, si sharaf iyo maamuus lehna u sii daayo kuna marti qaaday xafiiskiisa.
-Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo uu sheegay in siidayntiisa uu kala hadlay ra'isulwasaare Abiy.
-Hay'adaha xuquuqal insaanka gaar ahaan HRW oo warbixin cad ka soo saartay.
Cabdikariim ayaa dhanka kale sheegay in Ra'isulwasaaraha Itoobiya uu go'aan rasmi ah ka gaarayo arrimaha quseeya guud ahaan Itoobiya, gaar ahaan gobolka Soomaalida, wuxuuna dadka ugu baaqay in fursadaas sida ugu wanaagsan ay uga faa'iideystaan.